Association PATA MAMIKO
Articles + consultés
Nodimandry Ramose RANAIVO - Mpampianatra Maths sy Talen'ny Sekoly teo aloha.
Ramose Ranaivo, mpampianatra matematika ahy tamin’ny taona 1988 kilasy 1e D ary taona 1989, kilasy famaranana TD 2.
Isan’ny mpampianatra nalaza nasiaka tokoa Ramose, ary na ny fatahorana azy fotsiny aza dia tena nampahay avy hatrany satria lasa nianatra lesona be sy namita devoir foana.
Talen’ny sekoly Paul Minault ihany koa izy taty aoriana, tsy mety adinoko ilay fitsikitsikiny nanome ahy ny bulletins de note ko rehetra fony izaho handeha hanohy fianarana taty ampita ka nangataka ny relevés de notes sy recommandation tamin’ingahy Tale ny ray amandreniko.
Be ny soa notoavina tao amin’ny sekoly Paul Minault ary isan’ny mpampianatra mpanabe nitondra soa ho anay mpianatra tao Ramose Ranaivo.
Nodimandry ny 16 janoary 2016 teo izy tamin’ny faha-75 taonany.
Eny, tombondalana tokoa ny azy, mirary fiononana feno ho an’ny fianankaviany amin’izao fahalasanany izao ary mitondra teny fampaherezana ny fianakaviamben’ny Pata mamiko ihany koa noho ny fahalasanan’ny Ray amandrenin-tsika izao.
« Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. »
Jaona 14 and 6
FIHAONAMBE MAINTIMOLALY PATA 2012 AO FRANTSA
Toy ny fanao isan-taona, ny fihaonamben'ny maintimolaly PATA taona 2012 dia hatao ny sabotsy 7 jolay 2012 ao amin'ny Région Parisienne :
Base de loisirs St Quentin en Yvelines (78) - Trappes
Hisy fanoroan-dalana ahitana ny logo ny PATA eo amin'ny fidirana "Porte du Parc" mandra-pahatonga eo amin'ny toerana itobiana (hisy ny saina faneva PATA)
Fahatongavana manomboka : 10h30
11h00-12h00 : fandraisana sy fampahafantarana (présentation)
Marihina fa samy mitondra ny sakafony, izay hifampizarana sy iarahana rehefa eny an-toerana (hena hatono, tsakitsaky, salady, vary, gouter, rano ...)
14h30 : Kilalao samihafa miaraka amin'ny ankizy, hirahira
Aza adino ny tsihy ipetrahana, seza sy latabatra azo aforitra ary elobe, jeux de société samy hafa, gitara, baolina, kanetibe…..
Fotoana malalaka ho an'ireo izay te hitsangatsangana ao anatin'ny parc de loisirs miaraka amin'ny ankizy
17h00 : Fivoriambe (AG) Birao Pata aty France
Tafa sy dinika, fifanakalozankevitra mikasika ny anjara birikin'ny maintimolaly Pata aty Frantsa. Hamidy ao tee-shirt, casquette, pin's, boky faha-110 è.
19h00 : sakafo hariva, barbecue
21h00 : Firavana, fodiana
Tonga amin'io andro io koa ny "Chef de projet" nametraka ny tsangam-bato "Laboratoire informatique" avy any Iarivo hifampiresaka amin'ny rehetra tonga eo.
Ampitao ny hafatra ho an'ireo izay tsy tratra antso.
Contact: - Portable: 06.99.00.74.12 / 06.03.00.07.50
Accès par l'autorute: - Autoroute A12, Sortie St Quentin - Au rond-point, suivre le fléchage "Base de Loisirs"
1- RER ligne C, descendre à St Quentin en Yvelines puis 10 minutes à pieds ou Bus n°463 ou 10, Arrêt·: «·Base de Loisirs·»
2- Transilien (SNCF):
+ Ligne N (Montparnasse-Rambouillet) descendre à Trappes, puis demandez le bus à la gare qui vous dépose à la base de loisirs.
+ Ligne U (La Défense-La Verrière) descendre à Trappes, puis demandez le bus à la gare qui vous dépose à la base de loisirs.
Adresses des hôtels aux environs de la base de loisirs:
1- Alliance hôtel :
2- BEST WESTERN Hôtel Maurepas Saint Quentin:
3- Hôtels - Base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (au choix):
FAMARANANA NY FANKALAZANA NY FAHA-110 TAONAN'NY
KOLEJY PAUL MINAULT
Miarahaba ny namana rehetra,
Efa nody ventiny tokoa ny rano nantsakaina koa fifaliana ho an’ny rantsa-mangaikan’ny Kolejy Paul Minault (Komity teknika, Sekoly, Fram, Maintimolaly, Sakaizan’i Pata) ny manasa anao amim-panajana hanatrika ny famaranana ny fankalazana ny faha 110 taonan’ny Kolejy araka izao fandaharana manaraka izao:
o Asabotsy 24 martsa 2012 eny Androhibe – Kolejy Paul Minault:
Fanolorana ny tsangam-baton’ny faha 110 taona :
- 9h30: - “culte” ao amin’ny efitrano malalaka, fanazavana, “présentation”-ny boky faha-110.
- 10h00:- « flash mob », eo amin’ny “boulodrome”.
- Fanolorana sy fanokanana ireo tsangam-bato : bokin’ny faha 110 taona sy ny « Laboratoire informatique ».
- 11h00: dinidinika ao amin’ny efitrano malalaka.
- 11h30: hetsika ara-panatanjahan-tena.
Misy ny fahatsiarovana toy ny:
- boky faha-110 taona (amidy 10 000Ar.)
- tee-shirt (amidy 10 000Ar.) amin’ireo fotoana ireo.
Misokatra ihany koa ny "buvette"-ny Sekoly mandritra io fotoana io.
o Alahady 25 martsa 2012 eny amin’ny Katedraly FJKM Analakely
- 2 ora sy sasany tolakandro: fanompoam-pivavahana famaranana.
Manantena ny fahatongavanao ary mba hilazao ny namana mifanerasera na sendra tafahaona aminao.PATALOA VY !
Amin’ny anaran’ny vaomieran’ny serasera.
Association PATA MAMIKO:
émail: - Tél: +261.32.02.593.88
Kolejy Paul Minault:
émail:- Tél: +261.20.22.421.21
Fifaliana ho an’ny ratsa-mangaikan’ny Sekoly ny mampahafantatra anao ny fisian’ny “Andron’ny Sekoly” izay hatao eny Androhibe ny 16 sy ny 17 febroary 2012.
Alakamisy 16 febroary:
- 8 – 10 ora: fanadiovana efi-trano;
- 10 – 12 ora: fizarana isan-kilasy “parcelle, jardin”;
- 1.30 – 5 ora tolakandro: hetsika ara-koltoraly, fifanitsanana “Miss – Mister”.
Zoma 17 febroary:
- 8 – 11.45: lalao isan-karazany, famaranana (Foot, Basket), dihy ankalamanjana iraisan’ny daholobe;
- 12 – 1 ora: Sakafo “TOKO LAVA”;
- 1.30 – 5 ora tolakandro: hetsika ara-koltoraly, famaranana “Miss – Mister”.
Asaina manokana ny Maintimolaly mba hiara-misakafo amin’ny “TOKO LAVA”. Misy fandraisana anjara mirary amin’izany. Aoka hilaza mialoha (020 22 421 21) mba hiomanan’ny Sekoly.
Tongava maro, fa vanim-potoan-dehibe ireo daty ireo.
JOBILY RAMOSE DOFA
Ho fisaorana azy tamin'ny asa fanabeazana vitan'Andriamatoa Raharihasina Asolo, (Ramose Dofa) dia hisy fotoam-pivavahana, hanasana antsika rehetra.
36 taona nanasoavana teo amin'ny sehatry ny fanabeazana Protestanta izy nanomboka ny taona 1980 hatramin'ny 2011, ka ny ampahany betsaka dia teny Androhibe Kolejy Paul Minault.
Ny fotoana dia hatao ny Alahady 13 Novambra 2011 manomboka amin'ny 2 ora sy sasany, eny amin'ny Tranovato FJKM Ambatonakanga Antananarivo.
Misy valopy eny an-toerana ny androtr'io, ahazoana maneho fisaorana sy fankasitrahana azy. Taomy avokoa ireo nahazo soa tamin'ny zava-bitany amin'izany fotoan-dehibe izany: mpiara-miasa, namana, ray aman-drenin'ny mpianatra, tapaka sy namana, mantimolaly, sakaizan'ny PATA.
© 2020 Anciens du collège Paul Minault